Midowga Yurub wuxuu baabi'in doonaa canshuuraha is-cunista | Cusbooneysiinta Cagaaran
Baarlamaanka Yurub waxaa ka go'an inuu dhiirrigeliyo is-isticmaalka tamarta la cusbooneysiin karo dhammaan waddamada Midowga Yurub, marka lagu daro inuu ku boorinayo Waddamada inay "hubiyaan in macaamiisha xaq u leedahay noqo is-macaamil tamarta la cusboonaysiin karo ”.
Tan awgeed, dhammaan macaamiisha waa in loo idmiyaa "inay cunaan oo ay iibiyaan wax soo saarkooda dheeraadka ah ee korantada la cusboonaysiin karo, iyada oo aan la marin nidaamyada takoorka iyo eedeymaha ama aan loo dhigmin oo aan ka turjumayn kharashka.
Koongarasku waxay ansixiyeen wax ka beddelka kaas oo lagu weydiisanayo in loo oggolaado isticmaalka korontada ilaha dib loo cusboonaysiin karo ee wax soo saarkooda isla markaana ku sii jira dhismayaasha ay ku sugan yihiin "iyada oo aan lagu soo rogin cashuur, ajuuro ama cashuur nooc kasta ha noqotee". Wax ka bedelkan ayaa helay 594 cod oo ogolaaday, 69 ayaa diiday iyo 20 ka aamusay.
Dhowr xubnood oo xubin ka ah Xibiga Hantiwadaagga ayaa caddeeyay: “Waxaan ilaalinay wax dagaal ahaa, aragtidayda saxda ah, taas oo ah dammaanad qaadka is-cunitaanka oo ah xaq. Is-isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo oo ah xuquuq iyo baabi'inta caqabadaha maamul iyo mamnuucaya talaabooyinka sida cashuurta laga yaqaan wadankeyga, cashuurta qorraxda.
1 Waa maxay cashuurta laga qaado Qorraxda?
2 Wax ka beddelka mustaqbalka
Waa maxay cashuurta laga qaado Qorraxda?
Golaha Wasiiradu waxay ansixiyeen dhammaadkii 2015, Xeerka Boqortooyada ee lagu soo rogo waxa loogu yeero «lacag celinta»Si loo tamariyo is-cunid, loo yaqaan canshuuraha qorraxda
Nasiib darrose, tuhunkii ugu xumaa ee ururada macaamiisha, kooxaha deegaanka, ururada ganacsiga iyo mucaaradka ayaa rumoobay. Waxay muddo dheer ka digayeen xaqiiqadan, ilaa iyo 2 sano kahor wasaaradda warshadaha ayaa shaacisay ujeeddooyinkeeda
Iyadoo lagu saleynayo warbixinta soo jeedisay in wax laga beddelo Guddiga Suuqyada iyo Tartanka Qaranka (CNMC), iyo ansaxinta xigta ee Golaha Gobolka; dowladdu waxay ansixisay wareegtadan cusub dhib la'aan.
Canshuurta qorraxda ee lagu ansixiyay waajibaadka José Manuel Soria ee Wasaaradda Warshadaha waa mid ka mid ah sharciyadaas oo uusan muwaadinku fahmin. Waa maxay sababta Jarmalka, oo ah waddan aad noogu yar qorraxda, wuxuu dhigay taargooyin badan sanadkiiba marka loo eego Spain taariikhda oo dhan?.
Runtu waxay tahay in Isbaanishku uu ahaa mid dhiirrigeliye weyn tamarta la cusboonaysiin karo bilowgii qarniga, xitaa bixinta abaalmarinno kuwa rakibay baararka qoraxda. Si kastaba ha noqotee, fikirka suuqa iyo cabbiraadaha dowladda PP laga soo bilaabo 2011 waxay bilaabeen inay sii murgiyaan xaaladan.
Ururada caalamiga ah sida Greenpeace waxay u aqoonsan tahay "siyaasad cad oo ciqaabaysa tamarta la cusboonaysiin karo, keydinta iyo waxtarka tamarta".
Xaqiiqdii, Greenpeace waxay weydiisaneysaa dowladda Spain hogaamiye u noqo dib u cusboonaysiinta markale: Waxay dalbanayaan in mustaqbalka Sharciga Isbadalka Cimilada lagu daro 100% tamar nadiif ah. Waxay xasuustaan ​​in toban sano ka hor ay muujiyeen awoodooda farsamo iyo dhaqaale.
Wax ka beddelka mustaqbalka
Markii la weydiiyay mustaqbalka wax ka beddelkaan ku saabsan wada-xaajoodyada lala yeelanayo wada-hawlgalayaasha bulshada, Hantiwadaagga ayaa rajeynaya inuu taageero ka helo Guddiga Yurub waxayna ka digeen in baarlamaanka Yurub uusan is casili doonin, iyadoo la tixgelinayo taageerada qaybtan qoraalka ay heshay.
Haddii taasi aysan ku filnayn, fadhiga guud ee baarlamaanka Yurub wuxuu codsaday in kor loo qaado bartilmaameedka tamarta la cusboonaysiin karo ee Midowga Yurub. illaa 35% sanadka 2030, marka loo eego bartilmaameedka 27% hadda la dhajiyay.
Xubnaha baarlamanka ayaa ku ansixiyay 492 cod oo ogolaaday, 88 diidmo ah iyo 107 ka aamusay warbixinta PSOE MEP José Blanco, oo dejineysa booska baarlamaanka yurub marka laga hadlayo wadaxaajoodyada ay tahay in hadda laga bilaabo Golaha EU, hay'ad mataleysa Dowladaha Xubnaha ka ah, oo u ololeyneysa in bartilmaameedka laga dhigo 27%.
Shir jaraa’id, xubinta caddaanka ah ee loo yaqaan 'MEP' waxay ku dartay: «Maanta waxaan dhihi karnaa Midowga Yurub ayaa bixiyay fariin cad oo aan shaki ku jirin si loo gaaro yoolalka Paris iyo in kor loo qaado kala guurka tamarta ee ku saleysan tamar nadiif ah iyo tamarta la cusboonaysiin karo ”.
Si loo gaaro himilooyinka cusub ee dib loo cusboonaysiin karo, waddamadu waa inay dejiyaan bartilmaameedyo qaran oo u gaar ah, kaas oo ay isku dubbaridi doonaan isla markaana kormeeri doonaan ururka shaqaalaha.
Intaas waxaa sii dheer, xubnayaasha Midowga Yurub waxay isku raaceen in la dejiyo bartilmaameedka waxtarka tamarta ee 2030 sidoo kale 35%, taas oo laga xisaabin doono saadaalinta isticmaalka tamarta isla sanadkaas sida ku cad moodeelka PRIMES, oo u dhigma isticmaalka tamarta iyo bixinta. EU.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Midowga Yurub wuxuu baabi'in doonaa canshuuraha is-cunista
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato gaaska noolaha